Isbaanishka barafka hoostiisa: heerkulka -8ºC wuxuu reebay 60 waddo | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Laprensa.hn
Waxay umuuqatay inaysan imaanaynin, laakiin jiilaalka ayaa ugu dambayn degay SpainWuxuuna ku sameeyay sida ugu fiican ee ugu macquulsan: baraf iyo baraf ku dhaca woqooyiga dalka iyo qabow badan inta kale.
Meerkuriga heerkulbeegga waxay hoos ugu dhici kartaa siddeed digrii oo ka hooseeya eber, iyagoo uga sii daraya xaalada ay ku nool yihiin magaalooyinka sida Teruel, Cantabria ama Burgos.
Jiilaalku waa xilli, oo aynaan diidi doonin, ka tagi kara muuqaal qurux badan, laakiin waa inaan isku dayno inaan aad u taxaddarno, haddii aan baabuur qaadaneyno ama haddii aan si fudud u dooneyno inaan raacno. Waana taas, iyada oo aan la sii soconin, gobolka Teruel waxaa looga tagay ficil ahaan dhammaan waddooyinka aan la mari karin. Intaas waxaa sii dheer, caasimadda waxay joojiyeen gaadiidka dadweynaha iyo, si ay ugu wareegi karaan waddooyinka waaweyn, silsilado ayaa loo baahan yahay.
Magaalada Madrid gudaheeda, adeegga khadka Cercanías ee C-9 ee u dhexeeya Puerto de Navacerrada iyo saldhigyada Cotos ayaa sidoo kale la hakiyay baraf dartii. Dhanka kale, Asturias waxaa ku nool in ka badan 10 kun oo qof oo koronto la'aan ka dhacday natiijada duufaanta, waxayna sidoo kale leeyihiin tobanaan waddo oo loo xiray isu socodka.
Sawir - Laregion.es
Catalonia waxaa ku yaal afar waddo oo xiran, oo kala ah GIV-4016, GIV-5201, C-28 iyo BV-4024. Sida aysan taasi ku filnayn, waa qasab in silsilado loo adeegsado 44 waddo, in ka badan 230 qofna waxay sii wadaan koronto la'aan magaalada Ribera d'Urgellet, ee Lleida
Laakiin waxba weligood iyo ku-meelgaar ahaan ma socdaan, dabcan, sidoo kale. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in maanta oo Arbaco ah qulqulka hawada qabow uu ka soo galayo waqooyi-bari ee gudaha Yurub, taas oo sababi doonta in heer-kulku hoos uga dhaco 10ºC meelaha sarsare ee badh bari ee dalka, Jimcaha xaaladdu waxay bilaabi doontaa inay caadi noqoto. Laakiin iska jir, ma noqon doonto dhacdadii ugu dambaysay ee qabow ee sanadka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso ogeysiiska AEMET.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Isbaanishka barafka hoostiisa: heerkulka illaa -8ºC wuxuu ka tagayaa 60 waddo